Counselling Corner - Counselling Corner
We Are Providing Individual couple, family, Group Therapy and Counselling Services.
သင့်ဘဝရဲ့ လုံခြုံမှုက ကုထုံးပညာရှင်တွေ အတွက် အရေးကြီးဆုံးပါ
စိတ်ကုထုံးနှင့် ဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
Counselling နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Counselling Corner ကို တည်ထောင်သူ ဦးအောင်မင်းသိန်းနဲ့ The Voice က တွေ့ဆုံမေးမြန်း
တစ်ယောက်ချင်းကုထုံးကတော့ ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ပညာ ရှင်နဲ့ လုံခြုံသော ဂရုစိုက်သော မပေါက်ကြားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆွေးနွေးပြီး ခံစားချက်တွေ၊ ယုံကြည်မှူ တွေ၊ အပြုအမူတွေ ကိုစူးစမ်းရှာဖွေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Training and Technical Support -Basic counselling training, Advanced counselling, Group Counselling, Wellbeing, Gender and Sexuality, Leadership,
အလုပ်ခွင်နင့် ဝန်ထမ်းများဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ
အဓိကအာရုံစိုက်သောအရာများ- စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ ဒေါသထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အပြုအမူထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် ပုံရိပ်၊ ထိန်းချုပ်မှုအရည်အချင်း၊ ဗျူဟာများ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း
Counselling Cornerအဖွဲ့အစည်းသည်အရပ်ဘက်မိတ်ဖွဲ့အဖွဲ့များနှင့်လက်တွဲကာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စိတ်ကျန်းမာရေးဝန် ဆောင်မှူလုပ်ငန်းကို တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
Counseling Corner မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်များအဖွဲ့သည် အရပ်ဘက်အဖွဲ့များကို အားပေးသာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူသားအားလုံး၏ကောင်းကျိုးအတွက်ဦးတည်ထားပါတယ်။ သင်၏ စိတ်ခံစားမှုများ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှူများနှင့် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိုးတက်မှုများသည် သင့်၏လက်တစ်ကမ်း အလိုတွင်သာရှိနေပါသည်ဟု ကျွန်တော်များ ယုံကြည်ကြ ပါသည်။
Counseling Corner ကို၂၀၁၈ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့၏ရည်မှန်းချက် ခံယူချက်ဖြစ်သည့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ အခြားသူများရဲ့ဘဝကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို အပြုသဘောဆောင်သည့် လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်အောင် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်သွားရန်ဖြစ်သည်။
တစ်ရက်တစ်ခါ ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်၍ လူသားများ၏ ဘဝတွေကိုပိုမို ကောင်းမွန်အောင်ပြောင်းလဲရပါမယ်။
ဆွေးနွေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ အခြားသူများရဲ့ဘဝကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို အပြုသဘောဆောင်သည့် လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်အောင် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်သွားရန်ဖြစ်သည်။
ဦးအောင်မင်းသိန်းသည် လိုင်စဉ်ရကုခန်းဆိုင်ရာစိတ်ကုထုံးပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူသည် တစ်ဦးချင်း၊ စုံတွဲ၊ မိသားစုနှင့် အဖွဲ့လိုက် ကုထုံးများကိုအသုံးပြုကာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက် ကူညီအထောက်အပံ့ပေးသော Counseling Corner ကို စတင်တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူအဓိက သီးသန့်ထားကူညီနေသောအပိုင်းများမှာ ပူပင်သောကများသောသူများ၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေသောကုသမှုခံယူသူများ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်မင်းသိန်းသည် အပြောင်းအလဲများကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်သောကြောင့် ကုသမှုခံယူလိုသူများ၊ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုမပြတ်သားမှု ပြဿနာရှိသူများ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးပြဿနာ ရှိသူများ၊ ယောင်္ကျားမိန်းမလက္ခဏာ၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု စသည့် အကြောင်းအရာများကို ကောင်းမွန်စွာ ညွှန်ပြဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များက ကုသခံသူများ၏ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာပြောရလျှင် ကုသမှုလာရောက်ခံယူသူတို့ရဲ့ ရင်းနီးကျွမ်းဝင်မှုပိုကောင်းလာခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နားလည်လာခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးပိုအဆင်ပြေလာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဦးအောင်မင်းသိန်းသည် ကုထုံးပညာ အသုံးချရာတွင် ကုသမှုခံယူသူများ၏ လက်ရှိဖြစ်နေသော ဘဝအခက်အခဲများကို အာရုံစိုက်နိုင်သော လုံခြုံမှုရှိသော နေရာတွင် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ သူသည် ပညာရှင်နှင့် ကုသမှုခံယူသူတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းက ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်ကောင်းများရရှိသည်ဟု ယုံကြည်သည့်အလျှောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိမြင်မှု၊ လွှတ်လပ်မှု ကိုရရှိမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် နှစ်ယောက်လုံးပစ္စုပ္ပန်ကာလကို အာရုံစိုက်နိုင်ပြီး ကောင်းမွန်သောရလဒ်များ တွေ့ရှိနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
Read more: သင်ရဲ့ကုထုံးပညာရှင်
No.129, Room(111),36th Street,
(Middle Block), Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.
+959664017251